Orinasa mpamokatra boaty fanaovan-tsarimihetsika sinoa translucent China Lima
Fanamarihana: ny mpamily LED dia takiana hitantana ireo laharana trano ireo ary tsy tafiditra ao anatin'ny fividianana.
Tontolo iainana fampiharana: Hotely ivelan'ny trano, hopitaly, fivarotana antsinjarany, toeram-pivarotana lehibe, tobin-tsolika, tobin-dasantsy, valan-javaboary ary toeram-bahoaka isan-karazany.
Taratasy jiro LED LED 3D
Vita ny borosy
Adidy mavesatra 304 Stainless Steel
Ny androm-piainan'ny LED: ora 36,000
Haavony: 8 ”
Mila DC 12V 4-6W LED Driver (Tsy tafiditra)
Anisan'izany ny Hardware Hardware
Ny taratasinay Backlit dia azo amboarina amina karazana vy tsy misy fangarony sy titanium. Ny malaza indrindra dia Brushing Stainless Steel na Painted, saingy manana karazana famaranana tsy manam-paharoa toa ny vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina, varahina, ary ny oxidized isika.
Vita ny loko backlit
Azontsika atao koa ny mandoko ny taratasintsika Backlit amin'ny loko isan-karazany. Manana loko loko mahazatra 37 izahay fa afaka miloko ihany koa amin'ny loko avy amin'ny marika lehibe toy ny Pantone, Sherwin Williams, Benjamin Moore, ary Behr. Ny lokonay dia Baked Enamel ary maharitra mateza. Izy ireo dia miaraka amin'ny antoka mandritra ny androm-piainany ho an'ny fampiasana anatiny sy ivelany ka tsy mila miahiahy momba ny fametahana hoditra, ny fanjavona na ny fikapohana.
Fitaovana: Stainless vy / LED
Fitaovana jiro backlit
Manolotra safidy azo antoka Back Lighting tena mahafinaritra izahay. Ny jiro nentim-paharazana dia fampiharana mahazatra indrindra - miaraka amin'ny taratasy mitsangana eny ivelan'ny rindrina. Acrylic Back Lighting dia milay ihany, na amin'ny akrilika mangatsiaka na mazava ao ambadiky ny litera na logo ary manampy singa "Wow" fanampiny amin'ny tetikasanao.
Fomban'ny jiro Backlit Standard izay mijanona eo ambonin'ny rindrina 1 ″ - 2 ″. Io dia mamela ny vokatry ny jiro Halo Lit mahazatra
Fambara famantarana ny sisin'ny tendrontany
Tetikasa Acrylic Backer avy any aoriana mamorona vokarin'ny jiro voadio sy marina kokoa. Tsara ho an'ny habakabaka anatiny sy seho varotra.
Ny akrilika dia azo amboarina amin'ny fomba maro. Doko namboarina, nitaingina takelaka, na akrilika misy sosona ho fijery 3-D mahafinaritra - ireo rehetra ireo dia safidy tsara hanomezana ny pop signage fanampiny!
Volavola sy fandrefesana Ekena ny fanaingoana, ny loko isan-karazany, ny endrika, ny habeny azo atao. Aleonao omena anay ny sary famolavolana. Mazava ho azy fa raha tsy izany dia afaka manome serivisy famolavolana matihanina izahay.
Fonosana Ny ao anaty dia plastika sy sombin-javatra, any ivelany misy kitapo hazo; ivelan'ny hazo misy fantsom-by.
Teo aloha: Vinyl adhesive mandoko tena ho an'ny doka